Wonke umntu ufuna ukuba abantwana bakhe babe ngabanobuqili kunye neyona nto iphakamileyo. Umama noTata, abasele kwiminyaka emithathu bangabakho malunga nekhulu kwaye babonisa umnqweno omkhulu wokufunda ngokuzimeleyo, abakwazi ukuziyeka phantsi ukuba abantwana bayadlala ngamathoyizi kwaye abonakali nantoni kubalo neenombolo. Ungayifundisa njani umntwana ukuba afunde kwaye abale?
Okokuqala, kufuneka unyuse umdla kumntwana. Khumbula ukuba abantwana abanakuze bafundiswe "ngaphantsi komthi." Ukuba esikolweni ngandlela-thile kwamukelekile, ngoko kwixesha lokufunda esikolweni, ezo ndlela zenza inzondo yokufunda ngokubanzi. Ngako oko, kufuneka ufumane indlela kumntwana wakho kwaye uncede ukuba aqonde ukuba ihlabathi lamanani kunye neencwadi zithandeka kakhulu. Khumbula ukuba yonke imbuzi ibingumntu ngamnye. Ngoko ke, ezo ndlela abahlobo bakho nezihlobo abazisebenzisayo azihlali zilungile kuwe. Kodwa ke siya kuzama ukukunceda kwaye sikuxelele ngezinye iindlela ezinokuthi zithintele umntwana.
Ngoko, siza kuqala ngokufunda. Xa baneminyaka emithathu ukuya kweyesihlanu, bathanda iimvumi ezahlukeneyo kunye namabali amancinci. Akunjalo zonke iintsana zibona iindaba ezinzulu. Bathanda inqubo yokufunda ngaphezu koko kubazali babala. Ngoko ke, xa ufundisa umntwana, kufuneka ube nomdla kumbhalo ongekho umbhalo, kodwa kunoko uhlobo lokubonisa. Kule minyaka, abantwana banemibala eyintandokazi. Oku kungasetyenziswa. Umzekelo, ukuba inkwenkwe imthanda umbala obomvu, ngoko ungabi nobuvila kwaye upende kuyo zonke iileta "A" nale mbala. Bese ucebisa umntwana ukuba afumane iileta zibomvu. Njalo xa ewafumana, xelela umntwana ukuba le ncwadi ibizwa ngokuba ngu "A". Ngexesha elizayo, yenza okufanayo neleta "B" njalo njalo.
Ngethuba elide, abantwana sele befuna ukwazi ukupela igama labo. Oku kungadlala. Bhala ibhungu lakhe elifingqiweyo, uze uzalise. Thetha naye zonke iileta ezenza amagama. Okukhethekileyo ukuba igama lide kwaye iileta ziphindaphinda kuwo, umzekelo, njengeAlexander. Kule meko, unako ukumnika umntwana ukuba afumane zonke iileta ezifanayo. Emva koko udlala nalo mdlalo: cebisa ukuba ubhale kwiileta zegama lakhe igama elihlukile. Le ngcamango ifanele ibonakale imnandi kumntwana. Kakade, akuyi kuba lula kuye, kodwa kufuneka umncede. Ngendlela, xa abazali bebanceda abantwana, benza iphutha elilodwa elikhulu: baqala ukukhawuleza. Khumbula njalo ukuba umntwana ufuna ixesha elide lokucinga ngaphezu kwakho. Makhe agxininise kwaye angaze aphephe ukuphendula. Ngaphandle koko, uya kuba yinto eqhelekileyo yokuba ukuba ulinde imizuzwana emibini, ngoko umama okanye uTata uya kuphendula umbuzo ngokwabo, kwaye akayi kuba noxinzelelo. Ukuba umntwana uqala ukunika iimpendulo ezingalunganga, endaweni yokulungisa, bhetele uthi: "Uphosakele, lungela kwaye ucinge ngako kwakhona." Njalo xa umntwana enika iimpendulo ezichanekileyo, musa ukulibala ukumdumisa.
Ukufunda i-alfabhethi, ungasebenzisa kwakhona iibherela zakho ezithandayo. Mema umntwana ukuba abize igama ngalinye lokudlala, uze ufumane iileta, eziqala amagama. Ukwenza oku, uzakufuna amakhadi kunye ne-alfabhethi. Vumela intsana ibeke zonke izilwanyana zayo ezinobumba. Ngaloo ndlela, ukufunda kuya kudibana nomdlalo, kwaye iileta zikhunjulwa kangcono, kuba zidibene namagama awaziyo ngokugqibeleleyo. Emva kokuba i-alfabhethi ifundwe, unako ukuqhubela phambili kumazwi. Kule meko, kulungile ukuqala amagama angxamisekileyo, apho inani elincinci leencwadi. Yilungele into yokuba umfana omncinci uya kubhengeza nganye ileta ngokwahlukileyo kwaye akaze akwazi ukuzongeza kwigama. Kwimeko nayiphi na into, musa ukumtyhala umntwana kwaye ungalokothi ulibale ukumdumisa nangayiphi na, kwanokunqoba okuncinci.
I-Akhawunti - esinye esinye isifundo esinokuba nomdla kuzo zonke izingane. Kodwa kwakhona, ukuba usondela kule meko ngokuchanekileyo, umntwana wakho uza kuba matika ngokwenene. Ukuze umntwana abale, kuyimfuneko ukumkhumbuza amanani kuwo onke amathuba. Umzekelo, xa umntwana eqoqa amathoyizi, tshela kuye: "Enye, ezimbini, ezintathu, ezine ..." njalo njalo. Enyanisweni, kukulungele ukubala ukuya kwishumi ngaphambi kokuba umntwana akhumbule amanani, kwaye ke unako ukuya kuwo onke amanani. Enye indlela yokukhumbula iinombolo kukujika yonke into ibe ngumdlalo. Unako ukudweba okanye ukuthenga i-crochet enkulu kunye namanani, ngokubhekiselele kuyo umntwana angagxuma. Uya kumbiza ngeenombolo, kwaye uya kufuneka atyelele phezu kwakhe. Xa baneminyaka emine okanye emihlanu, abantwana banomdla wokuhamba rhoqo. Ngoko ke, umdlalo onjalo uya kubachaphazela.
Xa unyana wakho okanye intombi yakho ikhumbula igama lazo zonke iinombolo kunye ne-smozhetotli ezithengayo ngokubona, ungaya kwi-akhawunti. Kule meko, uya kunceda kakhulu imidlalo yokuchitha. Omnye wabo ngumdlalo apho amakhadi asetyenziswa khona. Enye yamakhadi ibonisa izinto ezahlukeneyo kwisixa esithile: iipilisi ezintathu zeenaliti, iibhola ezintlanu, iminwe eyisibhozo, njalonjalo. Umntwana ufuna ukufumana amakhadi afanelekileyo, ubale inani lezinto kwaye uzilungiselele ngokuchanekileyo. Njengomthetho, kwiiseti ezinjalo kukho amakhadi omdlalo omathandathu okanye anesixhenxe, apho kufuneka ulungise amakhadi kunye neeseti ezihambelana nabo. Ukuqala, unakho ikhadi lomdlalo kunye neeseti zamakhadi uze umema umntwana ukuba abize igama lakhe kwaye abale izinto kwikhoyili nganye, kwaye ngokufanelekileyo uziqhekeze ngokufanelekileyo. Phinda ngale ndlela kunye nawo onke amakhadi onayo. Ngale ndlela, abantwana bafunda ukubala izinto kakuhle. Emva koko, unokwenza umsebenzi onzima. Ngokomzekelo, beka onke amakhadi kunye nentlanzi, onke amakhadi ngeebhola kunye njalo njalo. Beka amakhadi phambi komntwana kwaye ucebise ikarada ngalinye ukuba ungeze amakhadi afunwayo. Okokuthi, ukuba kwimeko yokuqala ibhungu liyakwazi ukukhangela ngokubonakalayo, ngoko kulandelayo kuya kufuneka lucatshangelwe, kuba akunakwenzeka njalo ukuhlula "iimbono zamehlo ezintandathu" ukusuka ezintlanu. Ekugqibeleni, ungadlala lo mdlalo kunye nabahlobo bakho. Uzakufuna ukunika onke amakhadi kubantwana, uze ubonise amakhadi. Izingane zifunde ukukhawuleza ukubala kwaye zichane ukuba ngubani ohambelana nekhadi.
Ukuze abantwana bakwazi ukwenza imisebenzi yokuqala yokongeza kunye nokukhupha, yonke inkqubo kufuneka ibonwe kwakhona. Thatha izinto ezifanayo (umzekelo, ii cubes) kwaye ucebise ukuba umntwana ubale. Emva koko fakela amancinci ambalwa etafileni. Phinda uhlaziye oko kushiywe ebhokisini. Cacisa umntwana ukuba ukusebenza, ngelixesha iikhabhi zaza zincinci, kuthiwa ukukhupha kwaye xa kususa, isamba sonke sinciphise inani owathabathileyo (oko kukuthi, waphuma kwiibhokisi). Ngendlela efanayo unokufundisa umculo kunye nokungezelela. Kakade, akubona bonke abantwana abakhumbulayo oko abazali babo bathetha okokuqala. Nangona kunjalo, ukuba zibandakanyeke ngokufanelekileyo, ngokukhawuleza umntwana wakho uya kufundwa kwaye afunde, kwaye nangomnqweno omkhulu wokuqala ukucela abazali ukuba bamfundise into enye.
Iimpawu zophuhliso lwabantwana abasesekhohlo
Indlela yokuchazela umntwana ukuba uya kuba nomzalwana
Indlela yokufundisa umntwana ukulala?
Indlela yokufundisa umntwana ukuba ahlaziywe
Umntu wendoda emfutshane
Yintoni abayithobelayo xa bedibana nomfazi
I-Pizza kunye ne-chicory ne-pesto sauce
Ukwenza ukuguga ukuguga: imithetho yokufaka isicelo
Kumfanekiso "omtsha" - usebenzisa i-laser
Ubuhle ngaphandle kwemibingelelo: entsha iPANASONIC photopilator
Konke malunga nekhnoloji yokwandiswa kweetonki
Endleleni: Imifanekiso ye-TOP-3 yokuphumla kwamanxweme
Iingcebiso zobuhle bomfazi wamanje